Kalabadh Golaha Wakiilada Somaliland oo Diiday in ay Horfadhiistaan Madaxweyne Siiraanyo – Rasaasa News
Jan 14, 2012 Kalabadh Kolaha Wakiiladu Somaliland oo Diiday in ay Horfadhiistaan Madaxweyne Siiraanyo
Hargeysa, January 14, 2012 [ras] – “Ruuxii Dhulbahante ah ee ka qayb galay shirka Dhulbahnte uga socday Taleex, waa dambiile qaran talaabo sharciga Isaaqa waafaqsan baana laga qaadi” sidaas waxaa yidhi Madaxweyne Siiraanyo.
Madaxweyne Siiraanyo oo labo todobaad ka hor balansaday in uu la hadlo aqalka wakiilada Somaliland, ayey u soo xaadirtay 72 xubnood, 92 xubnoodna way diideen in ay yimaadaan iyaga oo ku sugan Hargeysa.
Madaxweyne Siraanyo oo la hadlayey aqalka wakiilada ayaa dhaw qodob soo hadal qaaday oo ah; wax qabadka maamulkiisa iyo waxa horyaal ee laga sugayo in la qabto. Shirka dhulbahante ee ka dhacaya Taleex waxa Isaaq ka qabo iyo isaga oo weeraray Telefiishinka Horn Cable.
Madaxweyne Siiraanyo, waxaa uu sheegay in maamulkiisu wax badan qabtay, hadan uu qaban doono hawlo muhiim ah oo dhinaca ciidamada iyo hayadaha dalka ka shaqeeya la xidhiidha.
Madaxweyne Siraanyo ayaa mar uu ka hadlayey shirka Taleex yidhi ” ruuxii dhulbahante ah ee ka qayb gala shirka dhulbahante Taleex uga socda waa dambiile, talaabo ayuuna maamulkaygu ka qaadi.” “Somaliland u dulqaadan mayso in dalkeeda wixii la doono laga dhax sameeyo, shirka Taleex waxa ka soo baxa waa af ee ficil noqon maayo.”
Madaxweyne Siiraanyo oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Telefiishinka Horn Cable uu yahay cadowga Somaliland, uuna fidinayo warar lid ku ah jiritaanka Somaliland. Hadalkaas oo ay ka xanaaqeen xubno ka mid ah wakiilada maamulka Somaliland oo shirka fadhiyey, oo u arkay hadalka madaxweynaha weerar uu ula jeedo beeshooda.
Madaxweyne Siiraanyo oo ay wakiiladu isu diyaarinayeen in ay su,aalo waydiiyaan kolka uu hadalka dhameey, ayaa arkay kiiyo irida si dhakhso ah Albaabka uga sii baxaya isaga oo aan nabad galiyo odhan. Waxaana is qabsaday buuq iyo sawaxan lagu sigtay in uu gacan qaad ka dhaco, Booliska ayaa deg deg u soo dhexgalay.
42,000 oo Guryo (Apartments) Cusub ah oo Laga Dhisayo Addis Ababa